5 ga-enwerịrị ihe maka nwaacha Boho Chic uwe akwa | Na 30, 40, & 50 - Buddhatrends
5 ga-enwerịrị ihe maka uwe mwụda Bohemian Chic
Ụdị Bohemia maka Ụmụ Amamihe
Ha na-ekwu eziokwu mkpụrụ obi bohemiabụ onye na-achọ ịma mma na ọkwa dị omimi karị. Onye di omimi, onye nwere onwe ya ma obu onye na-ebi ndu n'ime igbe, na-agbaji clichite na ndi nnupu isi. Amamihe na nnwere onwe a apụtaghị nanị na ụzọ mmadụ si ebi ndụ kamakwa o doro anya na ejiji ya.
Dịka, ka ụmụ nwanyị na-etolite, otú ahụ ka ha na-ahọrọ ka ha na-eji ejiji na-achọ ka ha mara mma ma nwanyị. Ụwa gbara anyị gburugburu, karịsịa ụwa nke ejiji na-agba ọsọ ngwa ngwa na agbanwe agbanwe. Nwanyị maara ihe maara otú ọ ga - esi mee ka ya na ụwa na - emepụta ihe na - eme ihe n'echeghị na ọ bụ naanị ya. Dika onye boho tozuru okè bu onye choro ime ka ndi mmadu nwee onwe ha na nnwere onwe, enwere m uzo ole na ole iji gbakwunye ihe ndi ozo.
Uwe ogologo, Maxis, na Gowns ogologo:
Maka ụmụ nwanyị n'etiti afọ iri abụọ ma ọ bụ ma ọ bụ karịa, nnukwu ejiji na-enwe ego na-akwụ ụgwọ na-adị mfe maka ụbọchị ọ bụla n'ụlọ, na ndị enyi ma ọ bụ maka njem gaa ụlọ ahịa. N'eziokwu, ị nwekwara ike dọpụ ha na nnọkọ oriri na ụzụ nke ọma ngwa.
Dịka ọmụmaatụ, jikọta uwe elu nke bohemia gị ụda ire ụtọ ma yikwasị ya na ngwa ụfọdụ na-atọ ọchị, ụcha egbugbere ọnụ ọhụụ, na oghere ndị a na-ahụ anya iji mara mma na nkecha n'oge ọ bụla.
Lee uwe a na weebụsaịtị anyị
Mbipụta na agba umenye nwatakịrị nwanyị ka ọ bụrụ onye na-eto eto. Okwesighi ka ị na-agbakwunye ụda ọkụ na ụda dị elu, ma ị ghaghị ịga maka nkpuchi ahụ ma na-agwụ ike ịchọta ndị tozuru okè na ndị mara mma. Kama nke ahụ, jiri mpempe akwụkwọ na agba agba dị iche iche na nchara na-ejikọta na ihe ndị mara mma na ụdị. Ịdị mma nke agba agba na-eme ka ị dị ọhụrụ,na mpempe akwụkwọ na-elebara ahụ gị anya
Lelee Cardigan a na weebụsaịtị anyị
Uwe a na-akwacha akwa:
Ọtụtụ ndị inyom tozuru okè na-arụ ọrụ ndị inyom na mkpa ịchọta uwe ejiji na ihe ndabere oge. Ilere anya na-achọ ihe na-adịghị mma, ma boho nwanyị nọ n'ime gị apụghị ịrapara uwe elu uwe na uwe na-adịghị mma. Tinye a tint nke boho n'elu gị na uwe elu gị ma jiri ha na-eme ka ha dị elu na ikpere ụkwụ.
Kaftan Pullover / Na-eyi uwe:
Uwe ndị a na-adịkarị mma na njirimara rụrụ arụ na ụdị mmanya. Ihe rụrụ arụ na-eme ka ha dị mma, na-eku ume ma n'otu oge ahụ, ha ga-enye gị obodo egwu obodo. Yiri ha dịka ejiji ma ọ bụ ụzọ na-akwacha akwa.
Ruo ogologo oge, ọtụtụ ntutu ụkwụ na-adọrọ mmasị ha na ụwa ejiji. Otú ọ dị, e nwere ụdị dịgasị iche iche a gbakwunyere ha karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye bohemian.Palazzouwe ogologo ọkpa na uwe mgbochi bụ ezigbo enyi maka nkasi obi na ụdị. Mgbe ahụ, e nwere nchara nchara na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ ị ga-esi họrọ dị ka ọ dị mkpa na oge.
Ngwa bụ akụkụ dị oké mkpa nke ọ bụla ime ihe. Elela anya n'àkwà gị ma gbakwunye akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị, akpaaka, ọkpụkpụ, na ọla maka anya zuru ezu.
Ihe nkedo Pashmina na usoro ihe omumu di iche iche na-adi nma na oyi na ogologo uwe, cardigans, na maxis. N'otu aka ahụ, akpa na akpụkpọ ụkwụ nwekwara ike ịgbakwunye ọtụtụ uwe gị.
Maka ngwaahịa zuru oke, gaa na ụlọ ahịa anyị ma bie ndụ Boho gị na Buddhatrends. Echefukwala ịgụ nke ọzọ blog posts!